Ogaden News Agency (ONA) – Binshangul/Gumuz oo Kubiirtay Kacdoonka Itoobiya Kasocda Ogaw Sababta.
Binshangul/Gumuz oo Kubiirtay Kacdoonka Itoobiya Kasocda Ogaw Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Binshangul/Gumuz ee xukuumada wayaanuhu gumaysato ayaa sheegaya in ay guud ahaan Gobolkaas kabilowdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo xukuumada TPLF ee wakhtigeedu gabaabsiga yahay.
Sida warkan aan kuhelay dhamaan daafaha Gobolka Binshangul/Gumuz ayaa hal mar ah laga iclaamiyay kacdoon lagu doonayo in shacabka Binshangul/Gumuz lagaga dulqaado cadawga mudada dheer dul-saaraa.
Kacdoonkan oo intiisa badan shalay biloowday ayaa lasheegayaa in lagu dilay 8 kamid ah ciidamada wayaanaha waxaana askarta dhimatay sitoos ah u weeraray shacab cadhaysan oo doonaya in ay shacabkooda lamideeyeen shucuubta kacday ee dadkooda xoriyada u raadinaya.
Qoomiyada Binshangul/Gumuz ayaa noqonaysa qoomiyadii 5aad ee kacdoon balaadhan kala hor timaada xukuumada Wayaanaha waxaana horaan kacdoonka waday qoomiyadaha Oromada, Axmaarada, Conso iyo qoomiyada Agew. Sidoo kale waxaa guud ahaan wadanka kacdoonada kubiiray dadka muslimiinta ah waxayna madaxda muslimiintu ku baaqeen in latuuro taliska macangaga ah.
Xukuumada wayaanaha ayaa hada maraysa xili ay daadxoortu sidato kadib markay isugu darmadeen caqabado dhinaca siyaasada iyo dhaqaalaha ah waxayna hada gaadheen meel rajo beel ah.
Dhinaca kale dadkii magaca lahaa ayaa si xowli ah wadanka uga baxsanaya iyagoo isu dhiibaya wadamada reer galbeedka waxaana todobaadadii ugu dambeeyay is dhiibayay Suxufiyiin, Siyaasiyiin, Ciyaartooy, Jilayaal iyo dad kale oo magac lahaa waxayna arintaasu rajo beel galisay taliskii wayaanaha.